Doorashada dalka oo la sheegay in musuq maasuq baahsan uu hare... | Universal Somali TV
Doorashada dalka oo la sheegay in musuq maasuq baahsan uu hareeyay
Machadka Heritage ee fadhigiisu yahay Magaalada Muqdisho ayaa wax cadaaladda ka fog ku tilmaamay Doorashada Baarlamaanka ee dalka ka socota.
Machadka Heritage ayaa warbixin uu ka soo saaray doorashada dalka waxaa uu ku sheegay in musuq maasuq baahsan uu hareeyay hannaanka geeddi-socodka ee doorashooyinka.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dib-u-dhaca xeeladeysan ee ay ku kaceen kuwa hoggaaminaya hannaanka doorashooyinka ay keentay natiijooyinka muranka dhaliyay iyo xasillooni darrada siyasadeed ee dalka ka jirta.
“Sanadkan, dib-u-dhaca xeeladeysan ee ay ku kaceen kuwa hoggaaminaya geeddi-socodka doorashooyinka, Senatorada Aqalka Sare ee madax ka taabashada lagu soo xushay iyo heshiisyada iyaga uun u daneynaya ee ay gaareen ayaa keenay natiijooyinka lagu muransan yahay iyo xasillooni darrada siyaasadeed ee dalka ka jirta." Ayaa warbixinta lagu sheegay.
Dhanka kale laba kursi oo ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka ayaa maanta lagu doortay Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Kursiga hore oo tirsigiisu ahaa #HOP067 ayaa waxaa ku guuleystay Yaasin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey), oo ah Taliyaha KMG ee Hay'adda NISA. Kursiga labaad oo tirsigiisu ahaa #HOP043 ayaa waxaa isna ku soo baxay Xuseen Yuusuf Qaasim (Xuseen Iidow). Labaduba waxaa la saadaalinayay in kuraastaasi ku soo bixi doonaan.
Golaha Midowga Musharaxiinta ee mucaaradka oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa si weyn uga horyimid qaabka ay ku socoto Doorashada Golaha Shacabka.
Afhayeenka Midowga Musharaxiinka, Daahir Maxamuud Geelle oo kulankaasi ka dib Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in doorashada dalka laga leexiyay jidkeedii, waxaana ka dhalan kara buu yiri burbur baahsan.
“Hadafka loo aasaasay Midowga Musharaxiinta weli waa taagan yahay, waxaan diidnay muddo kororsi, dad nool ayaa u dhintay. Doorashada dalka waa la qaloociyay, jidka waa laga leexiyey, sida ay hadda wax ku socdaana, waxaa ka dhalan kara burbur baahsan, doorasho la boobana waan soo aragnay.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Doorashada sanadkan ayaa lagu tilmaamay middii ugu khalafsaneyd ee dalka laga qabto, tan iyo intii dib loo yegleelay Dowladnimada Somaliya.
Kan-xigaBeesha Caalamka oo ku baaqday in door...
Kan-horeProf. Jawaari "Kursiga 103 waxa bixin...
62,797,016 unique visits